ဆိုင်ရှင် ကောင်မလေး နဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်လို့ ဝယ်သူ များနေတဲ့ ဆိုင်လေ – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဒီခေါက်ဆွဲ ကောင်းလွန်းလို့ စားတာလား ဆိုင်ရှင်လေး ချောလွန်းလို့ သွားတာလား ဆိုတဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ရဲ့ သီချင်းလို ဗီယက်နမ်က လမ်းဘေဈေးသည် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဟာ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ တွေရဲ့ကြား နာမည်ကြီးလို့ နေပါတယ် ။
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီး ဖျော်ရည် တွေရောင်းချတဲ့ သူမရဲ့ဆိုင်မှာ ပုရိသ အပေါင်းဟာ ရုန်းစု လို့နေ ပါတယ်။ ဖျော်ရည်ကို သောက်ချင် တာထက် ဆိုင်ရှင်လေးနဲ့ အတူတူ ဓါတ်ပုံရိုက် ချင်လို့ပါတဲ့။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပေးရင် ဖျော်ရည် ဝယ်သောက် မယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆို ချက်တွေလဲ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်တတ် ကြပါသေးတယ် ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် မိန်းမချော လေးကတော့ ဖောက်သည် တွေနဲ့အတူကို မငြီးမညူ ဓါတ်ပုံရိုက် ပေးလေ့ရှိ ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ခံရ ပါများလာတော့ ဘယ်လိုပို့စ် ပေးရမလဲ ဆိုတာ ကိုတောင် သိနေပြီဆိုတဲ့ ဆိုင်ရှင် မိန်းမချော လေးဟာ တကယ်ပဲ လှလား ပရိတ်သတ် တို့ပဲကြည့် သွားကြပါ တော့နော် … အဲဒီလို ဆိုင်မျိုး မြန် မာနိုင်ငံမှာ ရှိရင် ပရိ သတ်ကြီး တို့ကရော သွားဝယ် ကြမှာလား ?
ဒီခေါက်ဆွဲ ကောင်းလွန်းလို့ စားတာလား ဆိုင်ရှင်လေး ချောလွန်းလို့ သွားတာလား ဆိုတဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ရဲ့ သီချင်းလို ဗီယက်နမ်က လမ်းဘေဈေးသည် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဟာ အွန်လိုင်း
သုံးစွဲသူ တွေရဲ့ကြား နာမည်ကြီးလို့ နေပါတယ် ။လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီး ဖျော်ရည် တွေရောင်းချတဲ့ သူမရဲ့ဆိုင်မှာ ပုရိသ အပေါင်းဟာ ရုန်းစု လို့နေ ပါတယ်။ ဖျော်ရည်ကို သောက်ချင် တာထက်
ဆိုင်ရှင်လေးနဲ့ အတူတူ ဓါတ်ပုံရိုက် ချင်လို့ပါတဲ့။ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပေးရင် ဖျော်ရည် ဝယ်သောက် မယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆို ချက်တွေလဲ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်တတ် ကြပါသေးတယ် ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် မိန်းမချော လေးကတော့ ဖောက်သည် တွေနဲ့အတူကို မငြီးမညူ ဓါတ်ပုံရိုက် ပေးလေ့ရှိ ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ခံရ ပါများလာတော့ ဘယ်လိုပို့စ် ပေးရမလဲ ဆိုတာ ကိုတောင် သိနေပြီဆိုတဲ့ ဆိုင်ရှင် မိန်းမချော
လေးဟာ တကယ်ပဲ လှလား ပရိတ်သတ် တို့ပဲကြည့် သွားကြပါ တော့နော် … အဲဒီလို ဆိုင်မျိုး မြန် မာနိုင်ငံမှာ ရှိရင် ပရိ သတ်ကြီး တို့ကရော သွားဝယ် ကြမှာလား ?
ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူထားမိရင် ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခများ
ဘီးဖာတဲ့ အလုပ်ကို ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ (၁၀)နှစ်အရွယ် ကလေး